Manokatra ny fomban'ny Tanzania Mafia Island Mafia
Home » Lahatsoratra farany farany » Podcasts » Manokatra ny fomban'ny Tanzania Mafia Island Mafia
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao • People • Podcasts • fanorenana • Safety • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Persona iray manodidina ny hevitra hoe "fizahan-tany vaovao": Miadana, miroboka, tsara fanahy, eo an-toerana, maharitra, tia ny toetrandro.
Ity karazana fizahan-tany vaovao ity dia misy sakafo, zava-pisotro, dihy, filomanosana, torapasika fasika fotsy, antsitrika, fijerena vorona, fipetrahana sokatra, tranon-jiro, fitsangatsanganan'ny natiora ary traikefa ara-kolontsaina mahatalanjona. Izany rehetra izany dia miaraka amin'ny fifantohana amin'ny toetr'andro ary natao handao ny COVID-19 lavitra anao, fa miomàna amin'izany, satria tsy misy toerana hafa eto an-tany.
Tanzania sy Zanzibar dia nisokatra tamin'ny karazana fizahan-tany vaovao. Peter Byrne, CEO an'ny Nosy Mafia any Tanzania, namolavola fomba 20-point ary nampahafantatra izany tao amin'ny fananganana.travel sehatra: "Andao hanangana olona manodidina ny hevitra hoe 'fizahan-tany vaovao' (miadana, miroboka, tsara fanahy, eo an-toerana, maharitra, tia ny toetrandro) miaraka amina fandraisam-bahiny, eo aloha ary eo afovoany - toy ny amin'ny" fandraisam-bahiny "fa tsy an'ny olona."
Miaraka amin'ny tranga misy coronavirus any amin'ity firenena Afrikana Atsinanana ity, ny indostria tsy miankina dia nitarika ny famolavolana karazana fomba vaovao azo raisina amina toeran-tsena marobe. I Mafia Island dia torapasika kilasy eran'izao tontolo izao ary any amin'ny toerana fisitrihana any Tanzania.